डायलासिस एण्ड डाईग्नोष्टिक सेन्टर बनाउन चाहान्छौँः आचार्य -
लमहीमा मृगौला रोगीहरुका लागि हेमोडायलासिस सेन्टरको स्थापना भएको छ । सम्भवतः दाङ जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै मेसिन भएको यो सेन्टर स्थापनाका लागि भर्खरै खुलेको रोटरी क्लव अफ लमहीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । निःशुल्करुपमा मृगौला रोगीहरुलाई सेवा दिने यो सेवाले धेरै बिरामीहरुले निःशुल्करुपमा जीवन पाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले नसकिरहेको अवस्थामा एउटा सामाजिक संस्थाले गरेको यो उपलव्धि अवश्य पनि प्रशंसनीय छ । डायलासिस सेन्टरको स्थापनाको पृष्ठभूमि, रोटरीको पहल तथा केन्द्रलाई जीवन्त बनाउने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले रोटरी क्लव अफ लमहीका अध्यक्ष रविलाल आचार्यसित गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप…
प्रश्नः स्वागत छ, अनि बधाइ पनि लमहीमा डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गर्न अर्थपूर्ण पहल गर्नुभएकोमा ?
उत्तरः धन्यवाद, तपाई अनि तपाईको गोरक्ष दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई हेमोडायलासिस सेवा सञ्चालनका विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा ।
प्रश्नः कसरी सम्भव भयो, लमहीमा रोटरीको पहलमा हेमोडायलासिस सेन्टर सञ्चालन ?
उत्तरः सबैभन्दा पहिले मैले यसको सम्पूर्ण श्रेय हाम्रो माउ संस्था रोटरी क्लव अफ सेन्टर बुटवललाई दिन चाहन्छु । सो संस्थाका हामी सिस्टर संस्था हौं । हाम्रो आग्रहलाई हाम्रो माउ संस्थाले सहर्ष स्वीकार गर्यो । अनि इन्टरनेशनल रोटरीयनहरुको सहयोगमा यो सेवा शुभारम्भ भयो । यसमा हामीहरुलाई प्राविधिक सहयोग बुटवलस्थित गौतमबुद्ध मुटुरोग अस्पतालले गरेको छ । सो अस्पताल पनि रोटरी क्लव इन्टरनेशनलकै सहयोगमा स्थापना भएको हो । त्यसैले हामी गौतम बुद्ध अस्पतालप्रति पनि विशेष आभारी छौं ।
प्रश्नः कति लगानीमा यो सेवा सुरुवात भयो ?
उत्तरः हामीलाई यो सेवा सञ्चालनका लागि इन्टरनेशनल रोटरीले जम्मा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । यसैले लमहीको रातोडाँडामा यो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं । किनकि हामी त स्थापना भएको एक महिना मात्रै भएको छ । त्यसैले पनि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो रोटरी क्लव सेन्टर बुटवललाई दिन चाहन्छु । किनकि सो संस्था संसारकै रोटरी क्लवहरुमध्ये उत्कृष्ट संस्था पनि हो । जसमा ७५ जना व्यक्तिहरु मेजर डोनर हुनुहुन्छ । उहाँहरुले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ सामाजिक सेवाका नाममा रोटरी इन्टरनेशनलको खातामा जम्मा गरेपछि रोटरी इन्टरनेशनलले थप पैसा लगानी गरेपछि लमहीमा यो सेवा सम्भव भएको हो ।
प्रश्नः अहिले दिइरहेको सेवाका विषयमा भनिदिनुस् न ?
उत्तरः अहिले हाम्रो संस्थामा १० वटा हेमोडायलासिस मेसिन छन् । एउटा मेसिनमा एकजनाको हेमोडायलासिस गर्न करिब ४ घण्टा लाग्छ । सामान्यतया मेसिन ३ सिफ्टसम्म चलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामीसँग प्राविधिकहरु पनि छन् । यसले हामीले ९० जना मृगौला रोगीहरुलाई डायलासिस सेवा दिन सक्ने छौं । यद्यपि भर्खरै सञ्चालन भएकाले त्यति प्रचार–प्रसार पनि भएको अवस्था छैन, तर पनि राप्तीभरीबाट केही रेस्पोन्स आइरहेको छ । आवश्यक परे हामी मेसिन थप्न पनि डोनरलाई आग्रह गर्न तयार छौं । यो सेवा शुरु भएसँगै देउखुरीबासी निकै हौसिएका छन् ।
मृगौलाको डायलासिस गर्न अहिले देउखुरीबासीलाई नेपालगञ्ज, बुटवल तथा काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । किनकि घोराही र तुलसीपुरमा सबै मेसिन प्याक भएको अवस्था थियो । तर अब देउखुरीबासीले मात्र होइन सम्पूर्ण राप्तीबासीले निःशुल्क डायलासिस सेवा लिन लमही आउन सक्नेछन् । यसमा हामीले कुनै पनि बिरामीहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा भेदभाव गर्ने अवस्था आउँदैन । तपाई आफै आएर यो सेवा लिइरहेका बिरामीहरुको अन्तर्वार्ता लिनु भए सबै यथार्थ कुरा थाहा हुने छ । नेपालगञ्जमा पालो नपाएर हैरान भएका व्यक्तिहरु अहिले हौसिएर स्थानीयस्तरमै यो सेवा लिइरहेका छन् । डायलासिस सेवाकै लागि काठमाडौमा डेरा लिएर बस्नुपर्ने देउखुरीबासीको समस्या पनि अब टरेको छ ।
प्रश्नः यत्रो ठूलो महान अभियानमा हुनुहुन्छ, यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न के आर्थिक व्यवस्थापन पनि रोटरीले नै गरिरहला ?
उत्तरः होइन, उसले त संरचनासहित मेसिन उपलव्ध गराएको मात्र हो । अब सञ्चालनको अभिभारा हाम्रो हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि संस्थाले निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवा उपलव्ध गराउँछ भने त्यस्तो संस्थालाई प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराउने ऐन पारित गरिसकेको छ । त्यसपछि हामीले प्रयोगशाला पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । किनकि मृगौला रोगीलाई नियमित मृगौला परीक्षण गर्न सहज होस् भनेर । साथै थाइराइड, सुगरलगायत विभिन्न रक्त परीक्षणका लागि पनि हामीहरुले अत्याधुनिक मेसिनसहितको सेवा शुरु गरिसकेका छौं । हेमोडायलासिस सेवा निःशुल्क भए पनि प्रयोगशाला परीक्षणमा भने शुल्क लिने गरेका छौं ।
तर यो शुल्क पनि अन्य संस्थामा भन्दा निकै सस्तोमा हुनेछ । त्यसैले पनि मैले यो संस्थालाई हेमोडायलासिस एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर बनाउन खोजेको हो । हरेक परीक्षणले मात्रै मानव शरीरमा भएका विभिन्न रोगहरु पहिचान हुन सक्छन् । त्यसैले प्रयोगशाला सेवा लिन पनि मैले आम दाङबासीहरुलाई आग्रह गर्दछु । किनकि रोग पालेर बस्नुभन्दा समयमै उपचार पाए धेरै रोगको सहज उपचार हुन सक्दछ । यी दुवैथरी शुल्कबाट हामीले कार्यालय व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मासिक पारिश्रमिकलगायतका सेवा दिन सक्छौं भन्ने हाम्रो सामान्य आँकलन हो । यदि यी सेवाबाट पनि खर्च व्यवस्थापन हुन सकेन भने फेरि अर्को विकल्प खोजौंला । त्यसमा आम जिल्लाबासीहरुले साथ र सहयोग दिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर निःशुल्क डायलासिसका नाममा कुनै पनि बिरामीबाट कुनै पनि शुल्क नउठाइने कुरा म यहाँलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु ।
प्रश्नः डायलासिस सेवा सञ्चालनसँगै देखिएका केही समस्याका विषयमा भनिदिनुस् न ?
उत्तरः हो मैले भन्नै लागेको थिएँ, हेमोडायलासिस गरिरहेका केही बिरामीलाई रगत पनि चढाउनुपर्ने अवस्था आउने रहेछ । हामीले भोगेको समस्या बुटवल पुगेरसमेत रगतको व्यवस्थापन ग¥यौं । घोराही र तुलसीपुरमा रक्तसञ्चार केन्द्रहरु छन् । तर लमहीमा अहिलेसम्म पनि रक्तसञ्चार केन्द्र नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । रगत आकस्मिक कुरा हो, तत्काल उपलव्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । घोराही र तुलसीपुरमा पुगेर रगत उपलव्ध गराउन अलि असहज हुँदो रहेछ । त्यसकारण मैले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ शाखालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि लमहीमा पनि एउटा व्लडबैंक सञ्चालनमा ल्याइदिनुस् ।
जग्गालगायतका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न हामी देउखुरीबासीहरु कम्मर कसेर लाग्ने छौं । अर्को कुरा लमही अस्पतालको पनि स्तरबृद्धिको कुरा भइरहेको छ । यो अवस्थामा व्लडबैंक पनि अपरिहार्य हो । त्यसैले पनि लमहीमा एउटा रक्तसञ्चार केन्द्र भए धेरै बिरामीहरुलाई रगतकै अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्था हुने थिएन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसलाई रेडक्रसले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।
प्रश्नः अन्तमा गोरक्ष दैनिकमार्फत आम नागरिकलाई यो सेवाका विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
उत्तरः यो हामी सबैको साझा उपलब्धि हो । प्रयास हामीले ग¥यौं होला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर आवश्यकता थियो र नै यहाँ यो केन्द्र सञ्चालनमा आउन सम्भव भयो । अनि अर्को कुरा भन्नैपर्छ, यो सेवा आम नेपालीका लागि हो । हामीले अहिले सबै मेसिनहरु सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छैन । किनकि अझै पनि मेसिनको क्षमता अनुरुप बिरामीहरु यहाँ आइपुगेको अवस्था छैन । सायद प्रचार–प्रसार नभएर हुन सक्दछ । तपाई मिडियाकर्मीहरुले यो सेवाका विषयमा व्यापकरुपमा प्रचार–प्रसार गरिदिनुहोला ।
यदि बिरामीहरुको चाप अत्यधिक बढेको अवस्थामा हामीले मेसिन पनि थप्न सक्ने छौं । नेपालभरका कुनै पनि नागरिकलाई विना भेदभाव यो सेवा दिन हामीहरु तयार छौं । देउखुरीको रातोडाँडामा डायलासिसका लागि आउने कुनै पनि बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने छैन, यो हाम्रो अठोट पनि हो । इन्टरनेशनल रोटरीलाई फेरि आग्रह गरी मेसिन थप गरेरै पनि उपलब्ध सबै मृगौलाका बिरामीहरुलाई यो सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतमलाई सम्मान